Abasebenzisi abaningi kakhulu abhekene nenkinga ukuthenga idrayivu entsha, kungakhathaliseki yangaphandle hard drive noma imidiya ngemoto optical. Kunengqondo ukuxhuma kubo, futhi kwenziwe ngayo. Kodwa nakhu uhlelo ngandlela-thile ngokuzenzakalela ukuzibona yaphetha enqaba. Yini okumelwe uyenze? Lapha basisize yolwazi ngokuthi ungayenza kanjani isebenze e BIOS drive anoma yiluphi uhlobo. Ezimweni eziningi lokhu ikhambi nezokusigcoba kakhulu.
BIOS akaboni idrayivu: yini okufanele uyenze ekuqaleni?
Nakuba izinkinga kungani akusebenzi noma ukuthi isinqumo ezihlongozwayo, futhi wanquma ukubhala kube isiphelo sesimiso indaba ephathwayo, kungcono ukubona ukuthi yini inkinga ingase ibonakale ekuqaleni.
Kubhekwa ngochwepheshe eziningi, inkinga ngokwayo ukuthi esigabeni amadivayisi drive esanda exhunywe aliveli, itholakala lokuthi ukuthi akukhona nginomdlandla noma voltage awulona ngokwanele. Ngakho ekuqaleni kufanele uhlole lezi izilungiselelo.
Regulations ukuxhuma iyiphi ngemoto
Ngakolunye uhlangothi, le nkinga kungase kuhilele e idrayivu okungalungile ixhunyiwe. Njengomthetho, iningi computer, umthetho Master / Nceku ukuxhumana.
Kulokhu, isixhumi iluphu, enziwa Master Master, exhunywe kwi-main hard drive, kanye Slave - kunoma iyiphi enye. Ngokufanayo, ungakwazi afake Master Nceku isixhumi, noHezekeli. Endabeni engcono, kuphela ungenza ukuthi drive futhi izonqunywa, kodwa uhlelo lokusebenza kusukela ukuqala.
Indlela yokuvula i-e-drive BIOS yezindaba optical
Ngakho, ake siqale sicabangele ngemoto optical. Isixazululo elula umbuzo ngokwenza kusebenze idrayivu BIOS yangempela ukungena BIOS usebenzisa ukhiye ejwayelekile noma inhlanganisela okhiye (ngokuvamile Del, F2, F12, Esc, inhlanganisela yawo, noma izinkinobho abazinikezele kwi laptop) bese uthola esigabeni ezifanele.
Kuye ngokuthi iyiphi inguqulo ye-BIOS nomkhiqizi, lokhu kungaba ekhasini eliyinhloko (Main), indinganiso kulungiselelwa kwesigaba (Standard CMOS Isethaphu), eziphambili isethaphu imenyu (Okuthuthukisiwe noma Advanced BIOS Izici), njll Lapha kubalulekile ukuqiniseka ukuthi idrayivu efakwe, shayela i imenyu ngokucindezela Enter kuso, bese usetha ukubaluleka Inikwe amandla.
Uma umsebenzisi drive yakho ohlwini ayitholakali ngasizathu simbe, kufanele ubheke thwebula kwesigaba (Boot Ukulandelana, Boot Isethaphu noma umane Boot), lapho amadivayisi ukuqalisa ukupheqa ngokusebenzisa amadivaysi lungatholakali khona (isibonelo, ukusebenzisa eyinhloko ukuqalisa kwidivaysi engu-1-st Boot Kudivayisi) . Lokhu ngokuvamile kwenziwa usebenzisa okhiye PageUp noma PageDown. Uma idivayisi etholakele, kulungile, futhi umsebenzisi nje uye ayitholakalanga.
Indlela zihlanganisa i wangaphandle hard drive?
Manje ake sibone ukuthi ukuvula idrayivu kuzilungiselelo BIOS we exhunyiwe wangaphandle hard drive. Nazi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama - konke kuncike kulokho okujwayelekile it has.
Ngakho, ukuze uqale, njengenjwayelo, faka izilungiselelo esiyinhloko okokufaka-okukhipha uhlelo, bese ngifuna ithebhu okungukuthi ngemoto ezifanayo. Manje kudingeka uqaphe kakhulu. Kuye uhlobo drive kufanele uthole umugqa noma Sata, noma IDE, noma le-USB. Njengomthetho, uma uxhumano sifakwa kahle, yize omunye wabo sizobonisa kule divayisi, ngisho noma ungazi indinganiso yakhe. Khona-ke sibheka ukuthi umi phambi idrayivu. Uma isethwe Ikhutshaziwe, faka sub-menu bese uyishintshele Inikwe amandla.
Ungakhohlwa ukuthi ngaphandle kwezinguquko idrayivu ngeke zisebenze. Ukusebenzisa BIOS ethimbeni elifanele. In the version standard, hhayi ukumba on izingxenye kwimenyu enkulu, umane ucindezela ikhi F10, okuhambelana umyalo Londoloza & Phuma Isethaphu, ukuthi, ugcine futhi uphume kulungiselelwa. Ngemva kwalokho, ewindini Isiqinisekiso sizovela ngokukhetha usebenzisa okhiye (Y - yebo, N - akukho). Hit Y bese ulinda kuze Uhlelo liqaliswe phansi.
Priority isiqalo ukuqalisa
Indlela yokuvula idrayivu e BIOS, kuyacaca kakade. Ake sibone iphuzu elilodwa ngaphezulu ezibalulekile. Ake sithi ufuna ukushintsha i-oda ukulayisha futhi njengoba idivayisi lokuqala ukusungula i drive optical noma wangaphandle hard drive. Le ndlela ingasetshenziswa uma ufaka uhlelo, izinkinga, noma ukuze nje ukuqala OS kusukela HDD yangaphandle.
Njengoba kusobala siye thwebula sigaba futhi njengoba idivayisi lokuqala ukushaja setha idrayivu oyifunayo (idrayivu), bese ulondoloza ushintsho.
Njengoba singabona kusukela ngenhla, inkinga indlela ukufaka BIOS drive kwanoma yiluphi uhlobo, isixazululekile nje ngokwanele. Nokho, le ndlela ngezinye izikhathi kudinge izinyathelo. Ngokwesibonelo, kwezinye izimo udinga ukuhlola kudivayisi Manager ezifanele, okuyinto lungatholakala kusukela "Control Panel" noma umyalo kusuka console devmgmt.msc "Gijima." Mhlawumbe kuzomele zihlanganisa (ukusetshenziswa) lapha. Kwamanye amadivayisi angajwayelekile ukuthi uhlelo hhayi ngokuzenzakalela, kungase kudingeke ukufaka 'bomdabu "umshayeli umakhi. Nokho, ngokomzimba isimo nom idrayivu kanzima Kubalulekile ukunaka. Uma idivayisi uphumile emgqeni, awukwazi ukwenza lutho - kungakhathaliseki ukuthi uzama kanzima, le divayisi ngeke isebenze.
Imiyalelo, njengasezulwini, "uLizwi," flip ishidi
Legendary umkhiqizi Aroni Isipelingi uchungechunge: Biography, amaqiniso athakazelisayo kanye nezithombe
Bhuka "Azas": izilwane nezitshalo. Umlando esiqiwini "Azas"
Amacebiso: indlela yokutshala izinwele ekhaya